ကုလအကြီးအကဲ ဘန်ကီမွန်းကို ရခိုင်ပြည်သူတွေ ဆန္ဒပြမည်
နိုဝင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့က ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်း သတင်းစာရှင်းလင်စဉ်
ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းက ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက နေပြည်တော် မှာ ပြုလုပ်တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ရခိုင်ပြည် နယ်အတွင်းက မွတ်စလင်တွေကို ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးလို့ သုံးနှုန်းပြောဆိုသွားတာကို ကန့်ကွက်ဖို့ စစ်တွေမြို့ခံ သံဃာတော်တွေ၊ အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေက ဒီကနေ့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါတယ်။
မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းက လူနည်းစုအခွင့်အရေးလို့ ပြော ဆိုရာမှာ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တော ဒေသမှာဆိုရင် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေက လူနည်းစုဖြစ်ကြောင်းနဲ့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ အခွင့်အရေးကို ထည့် သွင်းပြောဆိုခြင်းမရှိတာဟာ မွတ်စလင်တွေဘက်က ဘက်လိုက်ပြောဆိုရာရောက်တယ်လို့ ဒီနေ့အစည်း အဝေးကို တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ ရခိုင်လူမှုကွန်ရက်အဖွဲ့ဝင် ကိုစိုးနိုင်က ပြောပါတယ်။
"မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းက သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်တုန်းက ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာမရှိတဲ့ ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ လူမျိုးတစ်မျိုးကို ဖန်တီးတဲ့စကားကို သူကသုံးနှှုန်းသွားတယ်၊ ဒါဟာ ကျနော်တို့ နိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာ အာဏာရော၊ ကျနော်တို့ဒေသလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေတွေ တည်ငြိမ်တဲ့အနေအထားကိုပါ သူကဆွပေးသလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်၊ တကယ့်ပကတိ အနေအထားမှာဖြစ်တဲ့ လူနည်းစုရခိုင်လူမျိုးရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကို သူလုံးဝထည့်တွက် စဉ်းစားပြီးပြောသွားခြင်းမရှိဘူး၊ အဲ့ဒါကြောင့် ကျနော်တို့က ဒီနေ့ကို ကျနော်တို့က အားလုံးညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ပဲ ဒီဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲတစ်ခုကို လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ကြပါတယ်"
ဒီနေ့ အစည်းအဝေးမှာ သံဃာ့အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ ရခိုင်လူမှုကွန်ရက်၊ အမျိုးသမီးကွန်ရက်၊ ရခိုင်အမျိုးသားပါတီနဲ့ ၈၈ မျိုးဆက် ရခိုင်အဖွဲ့ စတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေက ကိုယ်စားလှယ် ၆ဝ ကျော်တက်ရောက်ပြီး ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြ တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရခိုင်တွေမှာ မျှတတဲ့စိတ်ရှိရင် ရိုဟင်ဂျာလို့ ခေါ်ရုံမက ရိုဟင်ဂျာကို ထောက်ခံတဲ့ ဦးဦးလှစောကိုလည်း ဆန္ဒပြသင့်တာပေါ့။
၂၀၁၃ ခုနှစ် မတ်လကတည်းက သြစတြေးလျနိုင်ငံ၊ ဆစ်ဒနီမြို့မှာရှိတဲ့ Australian National University မှာ ရိုဟင်ဂျာလို့ သုံးရုံတင်မကဘူး ရိုဟင်ဂျာ အပါအဝင် အဖိနှိပ်ခံ အားလုံးဖက်က အမြဲတစ်သားတည်း ရပ်တည်ပါတယ်လို့ ဦးဦးလှစော ပြောခဲ့ပါတာဘဲ။
ကိုယ့်ခေါင်းဆောင် ဦးဦးလှစောပြောခဲ့တာကိုတော့ မသိချင်ယောင်ဆောင်နေပြီး ဘန်ကီမွန်းကျမှ ဆန္ဒပြမယ်ဆိုတာကတော့ ရှက်စရာကောင်းပါတယ်။
အောက်မှာ ဦးဦးလှစောပြောခဲ့တဲ့ လင့်ကိုတင်ပေးလိုက်တယ်။
Nov 17, 2014 04:41 PM
The world knows Rohingya exist or not more than you. You can not simply bluff the world.
Nov 17, 2014 03:59 AM